Uyilo | January 2022
I-18 yeeNgcaciso zeGadi ezingabizi kakhulu-Ezona ziNgcono zeGadi kuQingqo-mali
Izimvo zegadi: Ngaba ujonge izimvo zexabiso eliphantsi? Ukusuka kuyilo kunye nokuhombisa umhlaba kuhlaziyo olukhawulezileyo lokonga, gcina imali ngezi ngcamango zilula zegadi yendawo yakho yangaphandle.
Ungayicoca njani i-Decking kumanyathelo ama-3 alula
Ukuhonjiswa ngomthi kufuna inkathalo rhoqo ukuze ihlale ikhangeleka intle. Landela oku kulula ukuba ucoca njani isikhokelo sokuhombisa, kubandakanya indlela yokuyilungisa kunye nokulungisa umphezulu.
Isitiya sokuGcina esiPhantsi-Iingcamango eziGcinekileyo zoLondolozo lweGadi
Ukusuka ekutyalweni ukuya kwi-paving, yenza igadi yesondlo esezantsi ngokwenyani kwindawo yakho yangaphandle ngale mithetho yegolide- ilungile ukuba awuyithandi igadi, okanye awunaxesha layo,
Ukuthenga amanqaku aManzi eGadi- Iingcebiso ezili-10 zeMpawu zaManzi angaphandle
Ngaphambi kokutyala imali kwiimpawu zamanzi egadi yendawo yakho yangaphandle, zininzi izinto ekufuneka ziqwalaselwe, ukusuka kunikezelo lwamanzi ukuya kulondolozo ngokubanzi. Nazi izinto ezili-10 ekufuneka uzithathele ingqalelo ngaphambi kokuthenga iimpawu zamanzi zangaphandle
Uyenza njani igadi yelitye
Isitiya esiliwa sisisombululo esisezantsi sokugcina amathambeka anelanga okanye iikona ezingathandekiyo.
Isikhokelo sokubiya: iheji, iindonga, i-trellis, iipaneli
Isikhokelo kwizinto eziluncedo zokubiya kunye nendlela onokuzisebenzisa ngayo ukuphucula inkangeleko yendawo yakho yangaphandle.
Iingcamango zeGadi eziThambileyo-Izinto ezi-5 zokuqwalaselwa: Iithala, ukulinganisa
Izitiya ezithambekileyo zilungele iimpawu zamanzi kunye nemisinga, kodwa kunokuba yingxaki xa kutyalwa iintyatyambo okanye kuyilwa ipatio. Nazi iimbono ezi-5 zokujonga umhlaba onokuthi uziqwalasele.
Ngaba kulula kangakanani ukubeka ipatio?
U-DIY guru uJo Behari uthatha inyathelo ngenyathelo ngenyathelo.
Izitayile zeArch ye-6 yeeNdawo zokuThathela ingqalelo: IArch Wooden Arch, iArch Garden Garden
Yenza iarch yegadi okanye iarbor indawo ekugxilwe kuyo egadini yakho ngezi ngcamango zoyilo. Ukusuka kumthi ukuya kwisinyithi kunye nakwiingqameko ezinezixhobo zokutyala, ezi arches zongeza ubume, zazise iingcebiso ngombala kunye neenowuthsi ezinamakha, kwaye zinokuguqula indawo yakho yangaphandle ibe yindawo entle yeentyatyambo.
Uyakha njani isanti yakho
Ngaba uyilungisile i-emele kunye nemhlakulo?
Uyenza Njani eyakho eyakho iGadi yeNdawo- Iindawo ezihlala echibini
Enye yezona zinto zibalaseleyo onokuzenza egadini yakho ukunceda izilwanyana zasendle kukwakha ichibi lakho. Kodwa uqala phi ngokwenza eyakho ipuli yegadi yegadi?
Iingcamango zokuHlela kweGadi-Iingcebiso zokuHamba kweBorder yeNdawo ezivela kwiLandscaper
Ukukhangela imibono yokuhlela igadi kunye neendlela zokufaka umda wegadi kwindawo yakho yangaphandle? Ukuhlelwa kwegadi kunceda ekuchazeni nasekwahluleni izithuba kwigadi yakho.
Iingcamango zeGadi ende-Iingcamango eziCwangcisiweyo zoYilo lweGadi
Iigadi ezinde ezimxinwa ziziintlobo ezininzi eziqhelekileyo zegadi ejikelezileyo kodwa zifumana ukumila kwengca kunye nokuhamba kakuhle kwaye iya kujongeka intle ebusika nasehlotyeni.
Igadi yelizwe lesiNgesi-njani. Ukukhulisa iGadi yelizwe
Ezi zizinto ezi-5 eziyimfuneko ekufuneka uzenzile egadini yelizwe elifanelekileyo lesiNgesi- yenza 'amagumbi', iindlela zendlela kwaye ubambe indawo eneendonga zothango.
Iigadi zeenkundla: ungayifumana njani into wow unyaka wonke
Landela le mithetho mi-7 yegolide ukwenza indawo ekhethekileyo yangaphandle.
Izinto ezili-10 ekufuneka uzazi ngaphambi kokuba wenze ichibi lezilwanyana zasendle
Yeyiphi eyona nto intle onokuyenza egadini yakho ukunceda izilwanyana zasendle? Impendulo ilula- yenza ichibi lezilwanyana zasendle.
Igumbi lokuhlalisa indlu yamakhowa liphumelela ukuThululwa koNyaka we-2017
UGeorge Clarke ubhengeze ophumelele ishedi efanelekileyo ngexesha leChannel 4 yeZithuba eziMangalisayo zoNyaka.
Uyenza njani eyakho igadi yokuphilisa
Ukuphilisa izitiya, ezikwabizwa ngokuba ziigadi zonyango, ziyanconywa ngokubonelela ngemeko yempilo yokungabi nathemba. Nantsi indlela yokwenza igadi yokuphilisa.
Ukuyila iTrafu yophahla- Iingcamango zoYilo lweGadi
Igadi yophahla okanye ithala lophahla inokuba lulwandiso olufanelekileyo lwendawo yakho yokuhlala, enika indawo yokubalekela esekhusini ngaphandle, phezulu ngaphezulu kwezitalato zedolophu.
Iingcebiso ezili-10 zoyilo lwegadi yangoku
Ukuba ufuna ukujongeka kakuhle kwendawo yakho yangaphandle, landela le mibono yoyilo lwegadi yangoku.
fan evuthela umoya oshushu
ukuwa kwigumbi lokuhlala
iimpembelelo ezimbi ze-gentrification
Iikhabhathi ezigcweleyo ngokuchaseneyo
imifanekiso yeengcamango zokulungiswa komhlaba